Energy Sistem dia mandray ny vavolon'ny Espaniola eReader noho ny Energy eReader Max | Ireo mpamaky rehetra
Tao anatin'izay volana vitsivitsy izay dia mbola tsy nahita maodely vaovao eReader vaovao isika ary ireo vitsivitsy niseho dia manana toetra iraisam-pirenena na manerantany (ity farany ity raha raisintsika ny maodely Kindle sy Kobo Aura). Izay mamela maodely taloha eo amin'ny tsena Espaniôla na manana fijanonana kely dia kely noho ny fitaovana vaovao.
Toa ny orinasa Ny Energy Sistem dia naka ny batisan'ny Espaniola eReader ary nandefa modely vaovao izany dia tsy ny fanavaozana ny sehatra fotsiny fa safidy tsara eo amin'ny tsena rehefa misafidy eReader. Ity fitaovana ity dia nomena anarana hoe Angovo eReader Max.
Ity eReader vaovao ity dia mandray ny tsara amin'ny eReader mahazatra sy ny tsara indrindra amin'ny Android eReader, ka mahatonga ny fitaovana ho safidy tsara ho an'ireo mitady fitaovana famakiana sy fampahalalana. Ity Energy eReader Max ity dia fitaovana maivana miaraka amin'ny efijery 6 ″ izay ahazoana aina ampiasaina amin'ny tanana iray. Fatra fandrefesana ny fitaovana 163 x 116 x 8 mm ary ny lanjany dia 160 gr., ambanin'ny lanjan'ilay Energy eReader Pro.
Energy eReader Max dia manana fampiratiana 6 santimetatra miaraka amina vahaolana 600 x 800 teboka, 166 ppi ary teknolojia Letter. Ity fitaovana ity dia manana efijery mikasika sy bokotra sisiny izay hanampy antsika hamadika ny pejy, ary koa rafitra iray manohitra ny taratra taratra izay hahafahantsika mamaky amin'ny taratra hazavana ratsy toa ny morontsiraka. Ity fitaovana vaovao ity dia manana processeur dual-core 1 Ghz miaraka amin'ny ondrilahy 512 Mb sy fitehirizana anatiny 8 Gb. Ity fitehirizana ity dia azo hitarina noho i slot ho an'ny karatra microsd ahafahantsika manampy 64 Gb fanampiny.
Ho fanampin'izany, ny fitaovana dia manana fifandraisana Wi-Fi izay ahafahantsika mifandray amin'ny pejin-tranonkala, misintona atiny vaovao na mametraka fampiharana vaovao fotsiny. Ny fon'ny an'ity Energy eReader Max ity dia manana Android, kinova somary tranainy nefa mahery vaika ahafahantsika mametraka rindranasa marobe hitazomana vaovao, toa ny fampiharana Amazon na Kobo, matetika na fampiharana tsotra fotsiny hamakiana ny vaovao. Tombony lehibe izany satria ahafahan'ny mpampiasa manampy asa vaovao na loharanom-pamakiana vaovao, toy ny famakiana sanda fisaka. Ny Energy eReader Max dia misy ny fampiharana Nubico ary koa famandrihana iray volana amin'ity serivisy ity.
Ny bateria amin'ity eReader ity dia manana mahazaka 2.000 mAh, bateria mahazaka lehibe izany dia hahafahantsika manana enim-bolana hamakiana, raha mbola tsy mampiasa ny fifandraisana Wi-Fi na ny rindranasa mandany loharano maro amin'ny fitaovantsika izahay, toy ny tambajotra sosialy.
Energy Sistem MAX dia mifanaraka amin'ny endrika famakiana ebook maro, fa ny fananana Android, mety hanaiky ny endrika rehetra io, satria ny endrika tsy fantany dia mety ho tohanan'ny fampiharana mifanaraka aminy. Nefa koa, eken'ny fitaovana ilay DRM an'ny Adobe, ka boky be dia be miaraka amin'ity fetra ity no azo ampiasaina amin'ity fitaovana ity.
Manakaiky ny 125 euro ny vidin'ity fitaovana ity, vidiny tena mahaliana ho an'ny eReader toy izany, akaikin'ny Kindle Paperwhite ary miaraka amin'ny fahafaha-mampiasa azy io amin'ny sehatra rehetra. Eto no eritreretiko fa mamirapiratra ny Energy eReader MAX. Satria somary avo kokoa noho ny fitaovana hafa ny vidiny toy ny Kindle fototra na ny Kobo Aura, saingy azontsika atao ny misafidy izay sehatra ebook hampiasana, fivarotam-boky hividianana ebook avy na afaka hanana fandaharam-potoana amin'ny fitaovana fotsiny. Energy Sistem dia orinasa iray misy amin'ny kaontinanta maromaro, saingy nanamboatra toerana manokana ho an'ny tenany eo amin'ny tsena Espaniôla. Ka ny fahitana an'ity maodely eReader ity any amin'ireo magazay lehibe eto amin'ny firenena dia tsy ho zavatra hafahafa.
Ho ahy manokana dia hitako fa mahaliana ity maodely eReader ity Malahelo ny écran backlit aho, izay tsy voalaza na inona na inona ao amin'ny antontam-piraketany. Saingy na eo aza izany, ho an'ireo izay tsy mila jiro fanampiana, na tsy mila fitaovana premium hamaky ny bokin'izy ireo dia safidy tsara ity fitaovana ity. Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » Energy Sistem dia mandray ny fijoroana ho vavolon'ny Espaniola eReader noho ny Energy eReader Max
Volavola mahaliana ary koa ny bokotra fanodinana pejy izay ho tian'ny maro ary mitondra Android fa sarotra ho azy ny hahomby raha saika ho an'io vidiny io ianao dia manana Kindle Paperwhite iray manontolo. Tsy misy Android sy tsy misy bokotra ary tsy misy SD fa miaraka amin'ny antoka rehetra an'ny Amazon sy ny tranomboky lehibe.
Mijanona io mba hanamafisana ny jiro.
Etsy ankilany, ny Oasis vaovao dia mahatonga ahy hanana marika marobe hatrany na eo aza ny vidiny. Heveriko fa i Nacho Morató dia nandinika ny maodely efa voaomana… Nacho, afaka maneho hevitra momba ny hevitrao ve ianao na dia tsy mamoaka ny tsikera aza? izany ve raha lazainao amiko fa mendrika ny taloha dia handeha ho an'ireo vaovao aho.
Nacho Morato dia hoy izy:
Salama Javi. Hamoaka ny famerenana aho mba hanoratana ny fitaovana na dia efa lany andro aza ity maodely ity rehefa mizaha toetra azy aho, tsy fantatro raha hamoaka azy ho zava-baovao aho.
Amiko, ny marina dia faly aho raha toa ka marim-pototra ny vidiny na tsia, dia efa olana manokana manokana io. Toy ny hoe tsy maintsy mandany € 1000 amin'ny finday isika.
Holazaiko anao ny maodely "taloha" izay 6 ″, ilay vaovao 8 ary tsy mbola nanana mpamaky 8 eReader aho, miandry ny Kobo Aura One aho, fa amin'izao fotoana izao mbola tsy nikasika .
Nahagaga ahy ny halehiben'ireo fefy kely manery anao haka ny ebreader avy amin'ny keypad. Ny lafiny manify, tsy misy fefy, dia misy fikitihana toa milentika na dia tsy milatsaka aza, etsy ankilany ny lafiny amin'ny takelaka bokotra dia manome fiarovana, noho ny fiovan'ny fitaovana ary koa ny fiovan'ny hateviny. Na ahoana na ahoana, raha maka fonony ianao ary mamaky miaraka aminy dia tsy zava-dehibe izany.
Manana ny Kindle fototra aho, fa ny 4 tsy misy mikasika, ary efa zatra naka azy io tamin'ny fametahana ny rantsan-tànako teo amin'ny efijery. Fa rehefa zatra ny oasis, poof ianao, tena tiako izany.
Tena tsara ny jiro, ny zavatra tokana izay tsy misy maivana dia ny ambany dia ambany noho ny ao amin'ny jiroko taloha izay manana ny sary fotsy.
Fa andao, tsy nikasika ny Voyage aho, fa eo anelanelan'ny Paperwhite sy ny Oasis dia tavela miaraka amin'ny faharoa aho ary mikimpy ny masoko.
Ankasitrahana tokoa ny keypad….
Raha manana fanontaniana hafa ianao dia lazao aho fa mijery / andramako izany.
Misaotra betsaka Nacho, manazava betsaka ho ahy ianao. Mila mandresy lahatra ny vadiko fotsiny aho mba hamela ahy hanaram-po lol.
Azavao fotsiny fa ny vaovao dia 7 ″ fa tsy 8 ″ fa raha manana ny Kobo Aura izay lazainao. Marina ny voalazanao momba ny vidiny, vola be izany raha oharina amin'ireo maodely hafa izay mitovy asa nefa mazava ho azy, mazàna mamaky mandry aho, mitazona amin'ny tanana iray ilay mpamaky ary heveriko fa ny endrik'ilay Oasis dia mety amin'ny famakiana toy izao. Heveriko fa tena mendrika izany. Tamin'ny androny dia tsy nomeko lanja ny maodely izay anananao satria tsy nino aho fa ampy ny fandrosoana fa ankehitriny amin'ny alàlan'ny efijery lehibe kokoa ...
Zava-dehibe ihany koa ny hevitrao momba ny tsy fitoviana amin'ny jiro ... dia zavatra nolazaiko hatrany ary faly aho fa tsy izaho irery no mahatsikaritra an'io. Ny rahavaviko dia nanana ny jiro fototra (tsy misy jiro) ary hitako fa nisy tsy fitovizany tsara kokoa noho ny Paperwhite-ko niaraka tamin'ny jiro nivadika. Tsy isalasalana fa. Mahaliana. Heveriko fa misy ifandraisany amin'izany ny efijery jiro.
Raha mividy Oasis vaovao aho amin'ny farany, dia hanome hevitra momba ny fomba ...
Etsy andaniny ... mieritreritra ve ianao fa hisy vaovao lehibe amin'ny taona ho avy izao any amin'ny tontolo mpamaky? IMX 7? Nisy resaka momba ity mpikirakira ity 2 taona lasa izay ary mbola miandry azy isika ... efijery ink vaovao elektronika? Mandra-pahoviana ny e-ranomainty tsy nohavaozina?.
Tsy miteny intsony ireo tsaho momba ny fampisehoana loko ACeP ireo aho. Mazava ho azy fa tsy ho tonga akory ny «electrowetting» ...
Fa hisy ve ny vaovao sa hijanona hitovy ny zava-drehetra? izany no fanontaniana.